Hordhaca shaqada duubista gaariga wadida
Hoyga > Wararka > Warka Warshadaha > Hordhaca shaqada duubista gaariga wadida
Waxaa jira shaqooyin badan oo duubista xogta wadista ah:
Ugu horreyntii, shilka waa la soo celin karaa.
Marka labaad, wadista daalka waa laga hortagi karaa. Rikoorka wadista wuxuu duubi karaa waqtiga wadista darawalka. Rikoodheyaasha qaarkood waxay leeyihiin shaqo xusuusin ah. Haddii aad daalan tahay, waxaad xusuusin kartaa milkiilaha inuu iska ilaaliyo daalka.
Midda saddexaad waa inay door ka ciyaaraan kormeerka amniga. Rikoor-wadaha ayaa lasocda xaalada gaariga xilli kasta. Ku darista kontoroolka fog ee shabakada, marka walxaha gaariga ku jira la xado ama gaariga la waayo, amarrada nidaamka ayaa loo isticmaali karaa in si toos ah loogu sawiro gudaha iyo dibedda gaariga si loo helo tilmaamo lagu xallinayo kiiska.
Markay arkeen tan, saaxiibo badan ayaa is weydiin doona, sida loo rakibo duubistan duubista? Hagaag, aan ka hadalno sida loo rakibo rikoor wadista gawaarida.
Marka hore go'aaminta goobta rakibida ee rikoodhka. Rikoodhka wadista guud ahaan waxaa lagu dhejiyaa dhexda gaariga, taas oo aad ugu habboon duubista xaaladaha wadista.
Marka labaad, ku dheji kaarka xusuusta godka kaarka ee duubista xogta wadista, oo ku rakib duubista duubista saamaynta meel ku habboon. Hadda inta badan duubitaannadayada wadayasha wadaagga ah waxaa lagu rakibi karaa muraayadda dambe ee gaariga.
Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad qorsheyso jihada wadada ee dash cam.
Fiilooyinka duubista wadista: saqafka â † ba Baabuur wadaha duuliyaha ah 'balastar fudud'. Haddii safku dheer yahay, waxaad sidoo kale ka socon kartaa salka hoose ee baydalka rakaabka illaa tilmaamaha sigaarka.
Ugu dambeyntiina, geli fiilada korantada ee rikoodhka darawalka gawaarida shiineyska ah, daar muuqaalka rikoodhkeena wadista, dejiso waqtiga, rikoodhka, iyo kaydinta macluumaadka cusbooneysiinta farsamada, jawiga rakibkuna waa diyaar. Kadib, milkiilayaasha iyo asxaabta waxay dooran karaan inay u kaxeeyaan laba laab si loo tijaabiyo loona falanqeeyo bal in rikoorku si caadi ah u maamuli karo shaqada.
Haddii asxaabtaadu ay dareemaan inaysan lahayn awood-gacan-qabasho xoog leh oo ay ka baqayaan in rakibistoodu ay waxyeello u geysato gaariga, waxaad dooran kartaa dukaan 4s ah oo lagu dayactiro gawaarida, ama dukaan dayactirka baabuurta oo ay aad u yaqaannaan. Waxa kale oo aad aadi kartaa rikoodhka wadaha markii aad wax ka iibsato Markaad duubo rikoor, toos ayaad u rakibaysaa. Waqti iyo dhibaato badbaadi.
Hore:Isbedelada taariikhiga ah ee hagida gawaarida
Xiga:Deegaan noocee ah ayaa loo adeegsan karaa qalabka wax lagu rakibo?